Luxury Canopy Pamusoro Wiricheya Yekuwedzera
Categories: Mazuva ese Aids, Wiricheya Zvishongedzo
Iyi canopy inzira yakanaka yekugara yakatonhorera kana kungobuda kunze kwezuva rinokuvadza re UV UV. Kuisirwa kuri kukurumidza uye kuri nyore. Kana mabhureki aripo ari pachigaro denderedzwa rose rinogona kubviswa rodzoserwa pane chero nguva mune ingangoita mineti. Uyezve, haufanirwe kuitora kuti ubvise chigaro chako; denga iri richapeta pasi nehafu nechigaro chako
Canopy inogona kutenderera kubva kumashure kuenda kumberi pamusoro pe180 degree
Canopy yakavakwa neUV inopikisa zvinhu
Inobvumira komputa kupeta ichiri yakanamatira kune wiricheya
Inogona kukwana kubva pa16 "- 20" kumashure upamhi & chete 7/8 "dhayamita furemu
Yakareruka furemu & nehurefu-huchenjeri kupeta basa, inogona kupetwa kuseri kwe backrest.
Kureba & Angle Adjustable